Caroline Wozniacki Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha Europe Vatambi Vanotamba Caroline Wozniacki Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeImai Female Tennis Star inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita “Zuva". Our Caroline Wozniacki Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inokuunza nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika iye zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva rutsoka rwake nekukurumidza. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Caroline Wozniacki's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Caroline Wozniacki akaberekwa musi we 11th waJuly 1990 ku Odense muDenmark. Ndiye mudiki pane vana vaviri vakaberekerwa amai vake Anna (mudzidzi wevolleyball) uye kuna baba vake Piotr Wozniacki (muchengeti wemauto).
Vabereki vaCaroline Wozniacki Anna naPiotr.
Vabereki vaviri vari vePoland vakatamira kuDenmark mushure mekunge baba vaCaroline Piotr vasaina mukirabhu yebhola reDenmark, Boldklubben 1909. Pasina nguva vasvika, Caroline akaberekwa uye akakurira mudhorobha reHerfolge muKoge, Denmark. Kukura kusabhabhu pamwe chete nemukoma wake Patrik, wechidiki Caroline akateedzera chero zvaaiita. Patrick akatamba nhabvu, saizvozvowo Caroline. Hazvina kutora nguva refu Patrik asati afarira tenesi, saizvozvowo naCaroline.
Mudiki Caroline akakurira kuHerfolge muKoge, Denmark.
Caroline akatanga kutamba tennis pazera remakore re6 uye akaita zvemitambo kuburikidza nekurova guru-rabhobho-rubber pahafu yedare. Achifambira mberi, akatanga kutamba nemukoma wake uye baba vane bhora nguva dzose pamatare akazara. Achiziva kuti Caroline akanga ane nyanzvi yemutambo wetennis, Piotr akatsunga kudzidzisa mwanasikana wake nekumuendesa kumatareti etaireti kwaakakwikwidzana nevanomhanya vari nani mumataundi akavakidzana eVallensbaek, Birkerod, Vaerlose uye Farum.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Mhuri yaCaroline yakatamira kuguta reFarum muDenmark paakange ave zera 12 nechinangwa chekugamuchira zvivakwa zviri nani zveDanish Tennis Association's (DTA) Elite Center. Asati atamiswa, Caroline aive katatu-mukwikwidzi weDanish wevasikana vari pasi pegumi nemaviri uye mutambi wenhabvu muKoge. Paakagadzika kuFarum, akaenderera mberi nedzidzo dzevadzidzi paMarie Kruse's Chikoro.
Caroline aive katatu-mukwikwidzi wechiDanish musikana asati ave zera 12.
Paakanga ari kuchikoro, tennis yakawanda yakabatanidza zvidzidzo uye inobatanidzwa mukukwikwidza tennis. Akava mutsigiri weDanish panguva ye14 uye akaita kuti azive kuzvipira kwake kuva nhamba yemutambo mumwe mumutambo.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Mumwe muratidziri Caroline akaburitsa kubudirira kwakawanda muJunior makwikwi asati aita kutanga kwake paWTA Tour kuCincinnati's Western & Southern Financial Group Vakadzi Vanovhura muna Chikunguru 2005. Ane makore gumi nemashanu okuberekwa haana kufadza paWTA Tour yake yekutanga uye nhabvu yakatevera iye yakapinda mugore irero kusvika muna Ndira 15 paakabatana naAnna Tatishvili kusvika kuma semi fainari eAustralia Open yakapetwa kaviri.
Kubudirira kwakatevera kwaCaroline kwekutanga kwakauya mwedzi wakatevera paakasvika kwake kwekutanga WTA quarterfinals uye pasina nguva refu, akahwina Liverpool International Tennis Tournament. Pamusoro peyekutanga basa rake rekutanga, Caroline akahwina mutambo wevasikana veWimbledon pamwe nekuhwina vese singles evasikana uye zvakapetwa zveOsaka Mayor's Cup yaive mutambo wake wekupedzisira wejunior.
Basa raCaroline rekutanga raizivikanwa nekurasikirwa kushoma uye kukunda kukuru.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Caroline akatanga mutambo wake mukuru WTA mu 2006 uye akakunda hurukuro ye $ 25,000 International Tennis Federation (ITF) muIstanbul. Kubudirira mitezo yaiva musanganiswa wezvishoma zvigaro uye kurasikirwa kusvikira atora musoro wake wekutanga WTA Tour pa 2008 Nordic Light Open muStockholm.
Caroline Wozniacki akakunda iyo Nordic Light Open muStockholm muna2008.
Pasina nguva refu, Danish yakakunda chikamu chechipiri cheWTA paPilot Pen Tennis muNew Haven. The feat yakatevedzwa nekugadzirisa yekutanga WTA mbiri mbiri muChina Open. Somugumisiro, Caroline akaona kupesana kwemeteoric muzvikwata uye akakunda WTA Mutsva weGore mubairo we2008.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
2009 ndiyo gore iro Caroline akapinda nhangemutange dzakawanda asi akaita sarudzo yake yakanakisisa kuU.S. Open. Yakanga iri pamutambo uyu akava mukadzi weDanish wokutanga kusvika kuGran Slam yekupedzisira.
Mukurumbira wake wakazotevera wakazoguma gore rakatevera muna 2010 apo maitiro ake mumitambo yakasiyana-siyana yaakapinda, akatarisa kuma quarterfinals eChina Open apo akakunda Petra Kvitova kuti atore Serena Williams senyika itsva Nha. 1.
Caroline Wozniacki akave nyika nyowani Kwete 1 kekutanga mushure mekusvika kuChina Vhura makota fainari.
Zororo, sezvavanotaura, inhoroondo.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Caroline achiri kutoroora. Tinokuunzira mashoko pamusoro pake kufambidzana nhoroondo uye hukama huripo. Nyeredzi yeTennis yakatanga kubatanidzwa muukama ne goroferi Rory McIlroy pakati pe2011 ne2014. Shiri dzerudo dzakatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti "Wozzilory" nemuchina wekudhinda vaiita senge vaviri vasingapatsanurike mukati menguva uye vakatobatana mu2014. Zvisinei, McIlroy akamisa hukama mukati memwedzi mishoma kumuchato wavo.
“Dambudziko nderangu. Kukokwa kwemuchato kwakaburitswa mukupera kwesvondo kwakaita kuti ndione kuti ndakanga ndisina kugadzirira muchato wese uyu ”. Akati McIlroy mune chirevo. "Ndinoshuva Caroline yose mufaro waanofanirwa uye I kumutendai nokuda kwezviitiko zvikuru zvatakave nazvo. "
Caroline uye McIlroy yakanyorwa pakati pa2011 - 2014.
Achienderera mberi, Caroline akatanga kutambidzana nemuNBA nyota David Lee mu2015 mushure memusangano wavo wokutanga muMiami. Vakatora hukama huripo humwe humwe 9 mwedzi gare gare na Lee achizviratidza mitezo yaCaroline kuU.S. kuvhura. Akatangawo kugovana zvifananidzo zvaiye na Lee pane Instagram.
Vakatora ukama hwavo kune imwe nhanho inotevera kuburikidza nekubatanidzwa munaNovember 2017 uye rudo rwavo rwuri kuramba rwuchiwedzerwa kusvikira zuva. Hazvingave nguva refu michato yemuchato inonzwika kune vanodikanwa vanoda.
Caroline Wozniacki akapfimbwa naDavid Lee uye anogona kuzokurumidza kumuroora.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Caroline akaberekerwa mumhuri ine rudo yemitambo yevana. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Caroline Wozniacki baba: Piotr Wozniacki ndiye baba ve tennis star. Akanga ari nyanzvi yemutambo aiita tennis parutivi seAmateur. Akarovedza Caroline pamakore ake ekutanga mu tennis asati amuisa mukuchengetwa kwevanodzidzisa.
Caroline anoita seine unyanzvi hwakasimba hwehukama nababa vake apo iye akadzivisa vadzidzi vanomutevera kuti vamuite iye mudzidzisi wepano. Kunze kwekushanda semudzidzisi kumwanasikana wake, Piotr akambova maneja wake, vashandi, uye chero chipi zvacho chaaida kuva chekuita kuti Caroline ave nyanzvi yetennis.
Caroline Wozniacki nababa vake uye murairidzi Piotr.
Nezve Caroline Wozniacki amai: Anna ndiamai vaCaroline. Aive mutambi wevolleyball aive nehunyanzvi akatamba timu yevakadzi vePoland yenyika yevolleyball asati abereka Caroline kuDenmark.
Amai vanotsigira vaiperekedza murume wavo nevana kukirabhu yetenisi uko Caroline aidzidziswa asati akura zera 12. Iye anoramba achipa rutsigiro mutsika uye anochengeta tabo nekufambira mberi kwemwanasikana wake mumutambo.
Caroline Wozniacki naamai vake vanotsigira mai Anna.
Nezve Caroline Wozniacki vakoma: Caroline haana hanzvadzi asi hama yakakura inonzi Patrik. Kunyange zvazvo vaPatrik vakadarika pakati pe tennis nebhokisi semwana, akazvipira kune yekupedzisira nemitambo ye IF IF Skjold Birkerod muDenmark. Caroline akarumbidzwa Patrik kumusimbisa asingagutsiki chido chekutamba mu tennis nokuti haafariri kurasikirwa naye nguva ipi neipi pavanotarisana semana.
Caroline Wozniacki nemukoma wake Patrik.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chaunoziva nezvaCaroline Wozniacki's persona kunze kwedare? Gara shure apo tinokuunzira maitiro ehupenyu hwake kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakakwana wake.
Kutanga, Caroline anofara zvikuru kubva muruvanze uye anowanzoonekwa nekunetseka kunotapurirana uye grins zvakanyoreswa pameso ake. Anonzi zita rezuva, anonyanya kushandisa zuva rega roga achizvizadza nemafungiro akanaka.
Caroline Wozniacki ane munhu anofara uye anorondedzera zvakanaka nevanhu vasiri padare.
Kunyange zvazvo achibvuma kuti aine mapenzi maduku, Caroline ane ukama hwakanaka nevanhu vari kunze-mudare uye vane zvavanofarira mupfungwa. Chii chimwe? iye akazvidzivirira uye anoziva nzira yekukurukura nayo Danish, Chirungu, Polish nechiRussia. Zvimwe zvinofadza zvinosanganisira kuverenga, kuteerera Mimhanzi uye kutenga.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Caroline ane mari inofanirwa kubhadhara $ 30 mamiriyoni nemapoka pakati pevatatu vakakurumbira vanodhadharwa nechetheni mutambo. Mararamiro ake ane ruzha uye anoenda muchero nemari yake yakawanda.
Saizvozvo, ane dzimba dzakapararira pasirese kusanganisira Residence muMiami Florida yakakosha kudarika $ 2 Million USD. Caroline anonyanya kuda kufamba nendege uye kugutsa zvaari kuda zvekufamba mumugwagwa nemota dzinoverengeka dzemitambo senge maBMW, Mclaren's, Porsche mabhendi uye Audi A5.
Caroline ane Audi A5 mumotokari dzake muunganidzwa.
Caroline Wozniacki Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Caroline muchengeti weType Premier League team Liverpool uye kamwe akambotakura shati yeLiverpool yakasayirwa nemutambo webhola, Steven Gerrard pachivanze panguva ye 2011 Qatar Ladies Open.
Caroline akapfeka jeresi reLiverpool kutamba mutambo panguva ye2011 Qatar Ladies Open.
Akaenda Serena Williams kuti ave World No. 1 mu2010 asina kutora rimwe chete zita reStudio Slam. Munguva iyi, Caroline shamwari dzakanaka naSerena uye anotarisa Venus sechinhu chake chiduku.
Wechidiki Caroline nehudiki hwake Idol Venus.
Caroline akambomuchengetedzwa sechisimba nokuda kwekuputira tirasi pasi pechifuva chake uye kudzoka kuzotevedzera chimiro chevanhu vaSerna Williams.
Caroline akamboputira matauro pasi peKit yake kutevedzera Serena Williams chimiro.
Anotsigira uye anonakidzwa nekutsigirwa nemakambani mazhinji uye zvigadzirwa zvinosanganisira Babolat, Rolex, Adidas, Turkish Airlines pakati pevamwe.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Caroline Wozniacki Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- nekuda kwevakadzi TENNIS STARS
Simona Halep Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Novak Djokovic Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Rafael Nadal Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Roger Federer Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts